निजी अस्पतालले ३५ सयदेखि १५ हजारसम्म लिन पाउने
लकडाउन खुकुलो भएयता सङ्क्रमितको संख्या बढ्दैछ । पछिल्लो साता दुई अक्षरमा सङ्क्रमितको पुष्टि हुँदै आएकोमा तीन दिन यता सङ्क्रमितको संख्या दैनिक दुई सयभन्दा बढी थपिदै आएको छ ।
सङ्क्रमित थपिदा सरकारी कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको चाप बढेको छ ।
तर मन्त्रालयले तात्काल उपचारका लागि निजी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध नगराउने प्रष्ट्याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न चाहने बिरामीका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ का लागि सरकारी अस्पतालमा देशभरि दश हजार बेड क्षमता छ, त्यस अन्तगर्त शुल्क लाग्दैन ।” “निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको उपचार खर्चमा एकरुपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।”– डा. गौतमले थप्नुभयो ।
विश्वब्यापी महामारीको बेला सरकारले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको उपचारमा सहुलियत र एकरुपता ल्याउन यस प्रकारको मापदण्ड ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले भने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार निशुल्क हुने यसअघि नै प्रयट्यास्केको छ। यद्दपी भुक्तानीको माध्यमबारे प्रष्ट गरिसकेको छैन् ।